My First Love - APRIL LOVE - Prabin KC
Home Uncategorized My First Love – APRIL LOVE
आज बिहान् बिहान् April Fool मनाउन पर्‍यो भनेर कलेज मा सँगै पढेकी तर chat र real लाईफ मा कहिले नबोलेकी केटी लाई प्रपोज गरेको थिए । केटी ले पनि ठाउँ को ठाउँ मेरो proposal accept गरेर मलाई तुरुन्तै कल गरी र म तिमीलाई साह्रै माया गर्छु Prabin मलाई कहिल्यै चिट नगर है । तिमी मेरो FIRST LOVE हो कलेज को ,।तिमी मेरो कलेज देखी को क्रस भन्दै धेरै माया प्रेम का कुरा सुनाइ । भो अब त यो सोझी केटी सँग धेरै मजाक गर्नु हुन्न भनेर मैले तिमीलाई अप्रिल फूल बनाको It’s justaprank भने । मेरो चोखो माया प्रेम लाई तिमीले मजक बनयौ भन्दै रोइ कराइ गरी तिमी त मैले माया गरेको मान्छे तिमीले जे भने नि मान्छु ,तिम्रो लागि ज्यान पनि दिन सक्छु भनी र मैले केइ भन्न नपाउदै फोन काटी र मोबाईल switch off गरी। यत्तिकै मा मेरो मन मा धेरै कुरा हरु खेल्न थाले के उन्ले मलाई साचिकै माया गर्छिन त ? मेरो लागि जे पनि गर्न सक्छु ज्यान पनि दिन सक्छु भन्थी, मोबाईल पनि switch off भको आधी घण्टा भयो कतै आत्मा हत्या त गर्न आटिन ? मेरो मन झन झन डराउन थालयो, मलाई माया गर्ने मान्छे रहिछे केटी नि राम्रै थि,मैले अप्रिल फूल भन्न नपर्ने । मन मा आनेकौ कुरा खेल्न थाले ।
यत्तिकै मा उस्को मिल्ने साथी….. को कल आयो ,त्यो कल ले मलाई झन nervous बनाइदियो । हेर्दा हेर्दइ फुल घन्ती बजेर कल काटियो तर मैले कल उठाउन सकिन । लगतै अर्को unknown no. बाट कल आयो ,मन भित्र डर नै डर भए पनि मैले साहास जुटाएर call receive गरे । कुरा गर्दै गको उन्की बहिनी ले पो कल गरेकी रहेछ । तपाईंले यस्तो नगरनु पर्ने Prabin दादा मैले हजुर लाई अाफ्नो भिनाजु मानेकी थिए दिदी लाई कती जिस्काउथे हजुर को नाम जोडेर , बिहे मा हजुरको जुत्त लुकएर ५० हजार मग्ने प्लन सम्मा बनएकी थिए । तर तपाईं त धोके बाज हुनुहुदो रहेछ,यता दिदी रोएर आँखा राता राता भएर आँखा बाट रागत बग्ने बेला हुन लगिसक्यो।मेरो दिदी को माया प्रेम लाई तपाईंले मजाक बनाउनु भयो । She hates you now and she deserves better person than you.
मन मा नरमैलो लाग्यो झन उस्को बैनी को कुरा सुने पछी त मलाई पछुतो लग्न थालयो। केटी राम्रै नै थि मलाई नि हल्का हल्का मन पर्थ्यो हाम्रो जोडी नि क्य मिल्थ्यो होल भन्दै म Imagine गर्न थाले । बिहान त्यो घटना भए पछी मलाई खान खान पनि मन् लागेन अनी माफि मग्छु भनेर उन्को mobile no मा कल गरे तर उन्ले मेरो कल काटी दिइन ,अनी फेरी कल गरे फेरी पनि काटी । मैले उस्लाई I am sorry मैले तिम्रो मन दु:खाए ।
मैले पनि तिमीलाई sachhi कै माया गर्छु लेखेर please reply me भनेर मेसेज पठाए । उस्ले तेस्को पनि रिप्लाई दिइ न अनी प्लिज receive माइ फोन , i love you more k नपताए मेरा साथी हरु लाई गएर सोध भनेर पठाए । त्यस पछी उन्ले म सँग balance छैन भनी र call me भनेर टेक्स्ट गरी । कल गरेर I LOVE YOU BABE will you marry me ? मात्र के भनेको थिए तीन जना केटी मरी मरी हाँस्दै Happy April फूल Mr. Prabin KC भने र म मौन रहेर उन्को त्यो हासो मिठो हासो सुनी रहे ।.अब छिटो नै उन्लाई भेट्ने प्लन छ ।